Basikety: fantatra ireo ekipa midina N1B | NewsMada
Basikety: fantatra ireo ekipa midina N1B
Efa mifarana tanteraka ny taom-pilalaovana 2018, ho an’ ny federasiona malagasin’ny taranja basikety (FMBB). Raha tsiahivina, ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, ho an’ny sokajy N1A, natao ny alahady 28 oktobra lasa teo, no nanakatona ny fifaninanana. Efa fantatra avokoa, taorian’iny fifaninanana iny, ireo ekipa mihintsana any amin’ny sokajy N1B, amin’ny taom-pilalaovana manaraka.
Miisa dimy izany eo amin’ ny lehilahy: ny SBBC Boeny, nitana ny laharana fahafolo. Ny TMBB Analamanga, faha-11, ny AS Victoire Boeny, laharana faha-12, ny ABBS Sava, laharana faha-13 ary ny Sporting Diana, faha-14.
Klioba telo kosa ny mivarina N1B eo amin’ny vehivavy: ny CRJS Atsinanana, eo amin’ny laharana faha-10, ny CBB Otiv Alaotra Mangoro, faha-11 ary ny BCCA, faha-12.
Raha hiverenana, voahosotra ho tompondaka teo amin’ny N1A ny ekipan’Analamanga. Lasan’ny CosPN izany teo amin’ny lehilahy ary ny MB2 All kosa, ho an’ny vehivavy. Voahosotra ho mpilalao nampidi-baolina be indrindra teo amin’ny vehivavy i Fenoarisoa Judith, avy amin’ny Fandrefiala Analamanga, nahazo isa 226, raha i Donga Stevel Guy, mpilalaon’ny Cosfa, kosa ny teo amin’ny lehilahy, nahazo isa 252.
Mpilalao vehivavy mendrika i Mampionona Miora avy amin’ny MB2 All ary Ratianarivo Livio, avy amin’ ny ASCB, ny lehilahy.
Ligy nisongadina sy nahavita dingana goavana kosa Analamanga, nandrombaka ireo fifaninanam-pirenena, teo amin’ny sokajy rehetra.